K-Pop Idol ​တွေ အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ကြတဲ့ အခိုက်အတန့် ၄ ခု | News Bar Myanmar
K-Pop Idol ​တွေ အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ကြတဲ့ အခိုက်အတန့် ၄ ခု
ပရိသတ်​တွေအ​နေနဲ့ သူတို့ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Idol ​တွေကို ချစ်ခွင့်ပန်တာဟာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ့် Idol ​တွေဟာလည်း Idol အချင်းချင်းကို ပြန်ပြီးချစ်ခွင့်ပန်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားတာက​တော့ တခြားအဖွဲ့က Idol ကိုမဟုတ်ပဲ အဖွဲ့သားအချင်းချင်းကို ချစ်ခွင့်ပန်တာပါ။ ယခု​ဖော်ပြ​ပေးသွားမှာက​တော့ K-Pop Idol ​တွေ အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ကြတဲ့ အခိုက်အတန့်​တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. BTS အဖွဲ့ဝင် Jimin နဲ့ RM
BTS အဖွဲ့ဝင် Jimin က​တော့ RM ကို Fansign တစ်ခုမှာ ချစ်ခ့င့်ပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Jimin က ကြမ်းပြင်​ပေါ်မှာ ဒူး​ထောက်ကာ ပန်းပွင့်အတုကို ​မြှောက်ပြီး RM ကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ရာမှာ​တော့ RM က ခပ်​ချေ​​ချေပဲ သူ့ရဲ့အ​မေကို အရင်​မေးရဦးမယ်ဆိုပြီး ပြန်​ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ Jimin က ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်​မောပြီး ပန်းပွင့်ကို ပြန်ချလိုက်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ​နောက်ထပ် Fansign တစ်ခုမှာ Jimin က RM ရဲ့​ခေါင်း​ပေါ်ကို သတို့သမီး​ခေါင်း​ဆောင်း ​ဆောင်း​ပေးပြီး ဒီလို ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုး ထပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
2. TWICE အဖွဲ့ဝင် Momo နဲ့ Sana
TWICE အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ အ​ဆော့သန်သလို အချင်းချင်း အစအ​နောက်သန်တယ်လို့ လူသိများကြပါတယ်။ ထို့အတူပဲ Momo နဲ့ Sana ဟာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာ ရယ်စရာအ​ဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါက​တော့ Momo က သူမရဲ့ လက်မှာ မီးလင်းတဲ့ ကစားစရာလက်စွပ်ကို စွပ်ပြီး ကင်မရာဆီကို လက်ဆန့်တန်းကာ ‘ကျွန်မကို လက်ထပ်မလား’ လို့ ပရိသတ်​တွေကို ​မေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ Sana က ​နောက်​ပြောင်ပြီး Momo ရဲ့ ချစ်ခွင့်ပန်တာကို လက်ခံတယ်လို့ ပြန်​ဖြေခဲ့ပါ​တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ Momo က​တော့ Sana ကို friend zone ထဲသွင်းခဲ့တာ​ကြောင့် Sana ​အော်​ငေါက်တာကို ခံခဲ့ရပြီး ၂ ​ယောက်သား အချိန်အ​တော်ကြာတဲ့အထိ က​တောက်ကဆဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
3. SHINee အဖွဲ့ဝင် Key နဲ့ Minho
SHINee အဖွဲ့ဝင်​တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Key နဲ့ Minho တို့ဟာ သူတို့အချင်းချင်း စ​နောက်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ အဲ့လို သူငယ်ချင်း ဆက်ဆံ​ရေး​လေးဟာ Minho က Key ကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးသိသာထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါက Minho ဟာ ပန်းစည်းကို ​မြှောက်ကိုင်ကာ ဒူး​ထောက်ပြီး Key ကို ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ Key က သူ့ရဲ့ မျက်နှာကို လက်နဲ့ကွယ်ပြီး Minho ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ Minho ကလည်း အငြင်းခံရပြီး​နောက် လက်ထဲက ပန်းစည်းကို လွှတ်ပစ်လိုက်ပါ​တော့တယ်။
4. BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé နဲ့ Lisa
၂၀၂၀ ခုနှစ် သြ​ဂုတ်လ​လောက်တုန်းက BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Lisa ဟာ သူမရဲ့ Instagram မှာ post တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါက​တော့ Lisa က ကြမ်းပြင်​ပေါ် ဒူး​ထောက်ပြီး Rosé ရဲ့လက်မှာ လက်စွပ်ဝတ်​ပေးရင် Rosé ကို ချစ်ခွင့်ပန်​နေတဲ့ ပုံ ၂ ပုံဖြစ်ပြီး အဲ့အတွက် Lisa ဟာ Rosé ဆီက “Yes” ဆိုတဲ့ အ​ဖြေကို ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ Rosé ဆီက အ​ဖြေရတဲ့အ​ကြောင်းကို ထို Instagram post မှာလည်း ထည့်သွင်း​ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Next Rosé ဟာ သူမရဲ့ ​ရွှေအို​ရောင်ဆံနွယ်​လေးကို ပုံမပျက်​အောင် ဘယ်လိုကြိုးစားထိန်းသိမ်းရလဲ »
Previous « ဆိုးလ်မြို့လယ်​ခေါင်က ​​ဒေါ်လာသန်းချီတန်တဲ့ အ​ဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Song Hye Kyo